जसले ट्रम्पलाई राष्ट्रपति पदबाट हटाउन सक्छ ! - Sidha News
काठमाडौं। अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट अहिले चर्चामा छिन् । २९ मेमा उनले गरेको एउटा ट्वीट ट्वीटरमा निकै लोकप्रिय भएको छ । उनको यो ट्वीटमा २ दिनभित्रै २० लाखभन्दा धेरै लाइक आइसकेका छन् । ४ लाख ३५ हजारभन्दा धेरै रिट्वीट भएको छ र १ लाखभन्दा धेरैले प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो ट्वीटमा उनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पप्रति आ’क्रा’मक रुपमा प्रस्तुत भएकी छिन् ।
यो ट्वीटमा टेलर स्विफ्ले अमेरिकाको मिन्नेसोटा राज्यको मिनियापोलिसमा अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोएडको ह’त्या भएको घट’नामा अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रतिक्रियाप्रति तीखो प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । उनले लेखेकी छिन् ‘नस्लीयता र गोराहरुको सर्वोच्चतामा पूरै राष्ट्रपतिकाो कार्यकाल आ’हुती दिएपछि अब तपाइँ हिं’साको ध’म्की दिनुभन्दा पहिले नैतिकताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? ‘ह्वेन द लुटिङ स्टार्ट सुटिङ स्टार्ट ?’ हामी तपाइँलाई नोभेम्बरमा भोट आउट गरिदिनेछौं ।’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको छवि आप्रवासी विरो’धीको छ । काला जातिका नागरिकलाई अमेरिकामा आप्रवासीको रुपमा वि’भेदपूर्ण व्यवहार गरिएका घट’नाहरु अझै पनि भेटिन्छन् । आगामी नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको चुनावका बेला यसरी राष्ट्रपतिको वि’रोध हुनुलाई निर्वाचनमा उनको पराजयको कारण बन्न सक्ने रुपमा हेरिएको छ । आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रपति ट्रम्प दोस्रो कार्यकालको लागि लड्दैछन् । फोर्ब्सले टेलर स्पीफ्टको यो ट्वीटले ट्रम्पलाई हराउन भूमिका खेल्ने लेखेको छ ।